Kwa ụgbọ elu dị mma, Biko nyere aka!
Kwa ụgbọ elu dị mma, Biko nyere aka! 3 afọ 4 ọnwa gara aga #249
Nnọọ! Enwere m mmasị maka ụgbọelu ndị ahụ dị mma. Amaara mrịrị ihe gbasara ha, ya mere na ọ bụ ihe m ka chọrọ ịma. Ya mere achọrọ m ịma ihe mmemme ị ga-enwe ma ọ bụrụ na ị maara ihe ndị ọzọ dị mkpa m kwesịrị ịma ịgwa m. Ma echere m na ọ bụ ihe niile. Oh! ma ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ kwalite asụsụ ụgbọelu kwe nkwa ha welcome!
Kwa ụgbọ elu dị mma, Biko nyere aka! 3 afọ 4 ọnwa gara aga #250
Nke mbụ, na-ekele ma na-anabata gị na Forum.
Maka mbido, ịchọrọ igwe simulator. Enwere ọtụtụ n'ime ha, nhọrọ ahụ dabere na PC ị nwere, ọfụma ọfụma Microsoft Flight Simulators 2004 na FSX,X-Plane na P3D. Ha niile akwụ ụgwọ, yabụ ị ga-eche maka akụkụ ahụ. Enwere otu ụgbọ elu freeware efu, mana nke ahụ jọgburu onwe ya, yabụ enweghị m nsogbu ịkọwa ya.
Mgbe ahụ dabere na ụgbọelu ahụ, ị ​​ga-achọ ụgbọelu. Oge ikpeazụ, bụ onye ahịa ACARS. Onye ahụ dị iche site n'otu VA gaa na nke ọzọ. Ụfọdụ nwere ndị nke ha, omenala ha. Ndị na-emeghị nke ọma, ọtụtụ n'ime ha na-eji ụfọdụ ndị agadi na ndị ahịa na-enweghị atụ
Kwa ụgbọ elu dị mma, Biko nyere aka! 3 afọ 4 ọnwa gara aga #251
M ga-atụ aro FSX, agbanyeghị na ebe a .... ị ga - enweta ya site na Steam ruo mgbe kacha mara ihe m maara MS anaghị akwado Diski Version ọzọ. A ga m emechu ihu .... ọnụahịa Steam Edition bụ STEAL freaking! M kwụrụ $ 60 maka FSX: Gold Edition (Deluxe + Acceleration Add-on), and you're paying far less so ya. ONE downside to it is not ALL payware will work, but to My knowledge that's a short list.
N'ezie, m bụ Onye nwe / onye isi nke American Airways VA ma ebe ị na-anabata ịzụta ụgbọ elu payware ọ bụla ịchọrọ, anyị achọghị ka ị zụọ ụgbọ elu ka ị bụrụ akụkụ nke VA. Ọ BỤRỤ na ihe niile i nwere / chọrọ bụ freeware, m dị jụụ nke ahụ. Ụzọ m na-ahụ ya ... ndụ nwere ike bụrụ ihe zuru ezu B * TCH mgbe ụfọdụ, ya mere gịnị mere ị ga - eji dịkwuo otu? lol
A bụ m onye isi kwụ ọtọ. Ana m anwa ike m niile iji soro ndị na-anya ụgbọ m na-arụ ọrụ, ana m enyekwa ụfọdụ ụgwọ ọrụ maka ndị na-arụsi ọrụ ike (sitere na ego "ego" ruo n'inye ụgbọ elu naanị maka ha). Anyị dabere n'ezie na en English (dị ka na mpaghara lol), ma jiri sọftụ ụgbọ elu ha (nke dị mfe iji btw). Na mgbakwunye, enwere m ike ịnye gị ụgbọ elu freeware niile anyị na-eji (ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ya dị ebe a lol)
Ọ bụ ezie na m na-arụkarị nnukwu ibu ibu, ebe ọ bụ na nke a bụ ihe na-eme VA kacha $, ana m ekwe ka ndị ụgbọelu m kpebie ihe ha chọrọ ime.
Oge ike page: 0.543 sekọnd